DEG DEG: Wasiir ka tirsan xukuumadda soomalia oo goordhaw lagu dilay meel u dhaw madaxtooyada soomalia+magaciisa | Kismaayo24 News Agency
DEG DEG: Wasiir ka tirsan xukuumadda soomalia oo goordhaw lagu dilay meel u dhaw madaxtooyada soomalia+magaciisa
Wednesday May 3, 2017 - 6:53 under Breaking News by Tifaftiraha K24
Wararka aynu hada heleyno ayaa waxa ay sheegayan in goordhaw magaalada muqdisho lagu dilay wasiir ka tirsan xukuumadda ra’isul wasaare xasan cali kheyre.
Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska cabaasa c/llahi siraaji ayaa lagu dilay agagaarka madaxtooyada villa soomalia.
Warar hordhac ah ayaa waxa ay ka soo baxayan qaabka loo dilay wasiirka iyo cida dishay wararka qaar ayaa sheegaya in wasiirka ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda oo ka shakiyay gaari uu la socday allaha u naxariistee wasiir siraaj.
Gaariga uu la socday wasiirka la dilay ayaa la sheegay in uu ku dhawaaday gaari kale oo qof masuul ah uu saarnaay kadibna ciidanka ilaalada masuulka ay rasaas ku fureen baabuurkii uu watay allaha u naxariistee wasiir cabaas siraaj oo ahaay wasiirka wasaaraddaha howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda soomalia.
Dhacdada wasiirka howlaha guud lagu dilay ayaa waxaa ka hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomalia eng yariisoow isagoona bartiisa facebooka kusoo qoray in wasiirka ay dileen ciidamo dowladda ka tirsan.
” Allaha u naxariisto Wasiirka Howlaha Guud ee Dowladda Federaalka Cabaas oo gaari uu saarnaa ay xabad ku fureen ciidanka waxaana socda baaris” ayuu bartiisa ku qoray wasiir yariisow.
Sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in ra’isul wasaare kheyre uu booqday cisbitalka la dhigay meydka wasiir siraaji isagoona tacsi tiiraanyo leh u diray ehalada iyo qaraabada uu ka baxay wasiirka .
Dowladda si rasmi ah ugama aysan hadlin dilka wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda soomalia.
Cabaas c/llahi siraaji wuxuu ahaay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomalia ee laga soo doortay deegaanada jubbaland waxaana uu ahaay nin dhalinyaro ah oo wax kusoo bartay xeryaha qaxootiga dalka kenya kadib waxaa ra’isul wasaare kheyre u magacaabay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska soomalia.